URon Simmons uthetha ngemvelaphi 'Damn!', Ukunceda iliwa, iDusty Rhodes, ngaphezulu - Wwe
URon Simmons uthetha ngemvelaphi 'Damn!', Ukunceda iliwa, iDusty Rhodes, ngaphezulu
URon Simmons yiHolo leWWE lodumo
Kudliwanondlebe lwakutsha nje neSlam Wrestling, iWWE Hall ye-Famer uRon Simmons yathetha ngezinto ezininzi, ingxelo epheleleyo enokufumaneka kuyo Apha . URon waziwa njengentshatsheli yokuqala kumlo we-wrestling kwaye wayeyinxalenye enkulu ye-'Eath Attitude Era 'njengenkokeli' yeSizwe soLawulo '.
Apha ngezantsi kukho Amagqabantshintshi :
Ukuba yintshatsheli yokuqala emnyama:
Ngelo xesha elithile, andizange ndijolise ekubeni ngowokuqala wase-Afrika-waseMerika. Eyona njongo yam yayikukuba yintshatsheli yeHlabathi. Yayikuphela kwento ebisengqondweni yam, ukufumana ithuba lokuphumelela elo bhanti. Njengoko ixesha lihamba, ndiye ndaqala ukucinga ngokubaluleka kwayo kwaye ingaphezulu kunokuba bendicinga ukuba inokuba njalo. Kude kube namhla, abantu bandixelela ifuthe yayinayo ebomini babo.
Uthuli iRhodes :
Ndiqale kwitumente yaseFlorida Ukulwa kwaye wayenenye ye ifuthe kwikhondo lam lomsebenzi kunaye nabani na, kodwa uHiro Matsuda. Xa ndaxelelwa ngokudlula kwakhe, kwakungathi ukuba ixesha limile, andizange ndikholelwe. Ukugqibela kwam ukumbona ngexesha lika WrestleMania impelaveki. Wayengumfana omkhulu. Wayehlala efuna ukuqinisekisa ukuba uyazikhumbula izinto ezisisiseko, isiseko sento eyakhelwe ishishini. Wayesoloko endixelela ukuba ndingaze ndibemkhulu kakhulu ukuba ndingalibala ngabantu, ukuba uhlale unxibelelana nabantu. Wayengenguye owona msebenzi mkhulu eMhlabeni, kodwa wayelungile xa ethetha nabantu.
Ukunceda Ilitye kwiSizwe soLawulo:
Yile ndlela afumana ngayo ubungqina bakhe. Babengazi ukuba mabenze ntoni ngaye. Ndakwazi ukunceda Ilitye Dlula kwi-mic, ukumnceda kubuntu bakhe, ngamanye amagama akhe. Ufumene okuninzi oku kum kwaye ndonwabile ukumnceda ukumnika isazisi.
Yayingumcimbi wexesha ngaphambi kokuba afumane indawo yakhe, isazisi sakhe. Wayezama ukuza kunye nokwenza izinto ezazisenziwa yimvelaphi yosapho. Abazange bafune inguqulelo encinci yeNtloko ePhakamileyo uPeter Maivia. Babefuna ukuba afumane isazisi sakhe kwaye abe nguye. Kwaye kulapho wakhupha khona. Kuyandenza ndizive ndikulungele ukuba ndinento encinci yokwenza kule.
UDAMN WAKHE! intetho ebhaliweyo:
Masithi nje ndiza kutsiba kwintambo ephezulu kwaye ndiza kuthintela iqatha okanye ndingaphosa intshukumo okanye enye into, kwaye into yokuqala endiza kuyikhwaza yile 'Damn!' Kwaye abantu abakumqolo wokuqala yiva ndisitsho. Ngalo lonke ixesha ndibuyela esixekweni, abalandeli baya kuqaphela ukuba ngalo lonke ixesha kukho into eza kuhamba gwenxa, bendizokuthi 'Damn!' Ngenye imini ndabuza uBradshaw ukuba benza ntoni.
Ndicinga ukuba bathetha ngawe, watsho.
Ingaba uthetha ukuthini?
Ewe, ngalo lonke ixesha usenza into kwaye ayilunganga uthi 'Damn!' Kwaye yile nto bayithethayo.
Ababhali bayikhethile loo nto. Ke besiseChicago kunye neBooker T kunye UJohn Cena Benza into kwaye bandicela ukuba ndihambe nje eqongeni nasemva kokuba uCena egqibile ukuthetha nje athi 'Damn!' kwaye ubone impendulo. Kwaye kwaphela nabalandeli. Awusoze wazi ukuba abantu banjani, akunjalo?
apho ubalekela khona kwaye uqale ubomi obutsha
ibhola yebhola yenamba uthotho olutsha emva kwesuper
izinto onokuthetha ngazo nomhlobo omtsha
andinaye umhlobo omnye
I-becky lynch kunye neeseth rolls ezibandakanyekileyo